प्रार्थना पोइन्ट्स जब तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्न प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स प्रार्थना पोइन्ट्स प्रार्थना गर्न जब तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ
आज हामी प्रार्थना चिन्ताको विषयमा छलफल गर्नेछौं जब तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ। चिन्ता मनको खराब मनोवैज्ञानिक स्थिति हो जसले चीज, समस्या वा सम्भावित समस्याको बारेमा भय, क्रोध वा असन्तुष्टि सिर्जना गर्दछ। चिन्तित हुनु खराब चीज हो, यसले समाधानलाई आउँदैन। चिन्ता आनन्दको चोर हो। चिन्तित मानिस केवल चिन्तित, क्रोधित, डराउने छ, उसलाई कुनै खुशी थाहा हुँदैन।
एलिया बाइबलीय व्यक्ति थिए जो समयमै एक पटक चिन्तित भएको थियो। पहिले नै भनिएझैं जब तपाई धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ, यसले समस्या सिर्जना गर्दछ जुन पहिलो स्थानमा अवस्थित छैन। एलियाले बालको सामु ठूलो आत्मविश्वास देखाए पछि पनि ईजेबेलले उनलाई धम्की दिए पछि लुकिरहेको थियो। एलिया यति थकित भए कि उनी उसको लागि मृत्यु आउन चाहन्छन्। उनले परमेश्वरलाई याद गरेन वा महसुस गरेनन् कि परमेश्वरले उनको रहस्यहरू सुल्झाउन सक्षम हुनुहुन्छ जब उनले प्रार्थना गरे कि उनले आफ्नो जीवनको पुस्तकमा पुस्तक लिनु पर्छ १ राजा १:: I मैले पर्याप्त प्रभु पाएको छु, उनले भने। मेरो जीवन लिनुहोस्, म मेरो पुर्खाहरू भन्दा राम्रो छैन।
काम अर्को मानिस थिए जो उसको ठूलो क्षतिको कारण डिप्रेसनसँग लडिरहे। उसले आँखा झिम्काउनको लागि काम गरेको सबै कुरा गुमायो। उसको साम्राज्य धुलोमा परिणत भयो र ऊ भय terrible्कर बिरामी पर्‍यो। अय्यूब यति विघ्नित भएका थिए कि उनले परमेश्वरलाई दिक्क पारेको जीवनलाई अनुमति दिनको निम्ति उनलाई अहिले सम्म किन राखेका छन् भनेर सोध्यो। काम :3:११ किन के म गर्भमा नै मर्नुपर्‍यो र गर्भदेखि नै मरेँ? ” यो एक मान्छे को कहानी छ कि उसको वर्तमान अवस्था को कारण चिन्तित छ। आफूले बिर्सिएको सबै कुरा परमेश्वरको मदतसँग थियो र मानव दिमागले कल्पना गर्न सक्ने कुरा भन्दा परोपकारी र प्रशस्त मात्रामा परमेश्वर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उसले तुरुन्तै बिर्सेको थियो।
यदि तपाईं केहि चिन्तित हुनुहुन्छ भने, यो पछाडि बस्न र अन्त आउने आशा गर्न पर्याप्त छैन। तपाईंले चिन्तामा पार्ने सबै कुराको विरुद्धमा तपाईंले प्रार्थनाको वेदी उठाउनु पर्छ। म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश गर्दछु, तपाईको गालामा आँसु झार्न सक्ने सबै कुरा, भगवान्ले येशूको नाममा हटाउनुहुनेछ।
प्रभु येशू, म एक नयाँ दिन हेर्न तपाईंले मलाई दिनु भएको अनुग्रह को लागि धन्यवाद छ। म तपाईंको जीवनमा मेरो आशिष् र प्रबन्धको लागि धन्यवाद छ, प्रभु तपाईंको नाम येशूको नाममा उच्च पारियोस्।
प्रभु, म तपाईंको हातमा मेरो जीवन दिन्छ, म तपाईं येशूको नाम मा मलाई मदत गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। मद्दत चाहिन्छ भन्ने मेरो जीवनको हरेक क्षेत्रमा, म येशू को नाम मा मेरो लागि जारी गरिएको छ कि प्रार्थना गर्दछु। मेरा आँखालाई डाँडाहरूतिर हेर्ने छन् जहाँबाट मद्दत गर्नेछु? मेरो सहायता स्वर्ग र पृथ्वी बनाउने परमेश्वरबाट आउँदछ। प्रभु म तपाईं येशू नाम मा मलाई मद्दत पठाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछन्।
बुबा प्रभु, म प्रार्थना गर्छु कि मेरो आँखामा आँसु ल्याउने प्रत्येक परिस्थितिमा, म प्रार्थना गर्छु कि तपाईंले येशूको नाममा तिनीहरूको समाधान ल्याउनुहुनेछ। प्रभु, म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईले मलाई सँधै समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। म मेरो समस्या यति ठूलो हुन दिन्न कि म तपाईको शक्तिलाई चिन्न सक्दिन। मलाई सधैं तपाईंलाई येशूका नाममा मेरो समस्याहरू भन्दा ठूला हेर्न सिकाउनुहोस्।
हे प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंको दाहिने हातले क्रोधको आश्चर्यकर्मले मलाई संकष्टमा परेको कष्टबाट मलाई भेट्नेछ। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंको दाहिने हातले मलाई येशूको नाममा बचाउनेछ।
प्रभु येशू, धर्मशास्त्र भन्छ, कुनै चीजको लागि चिन्ता नगर, तर सबै कुरामा प्रार्थना, प्रार्थना र धन्यवादको माध्यमबाट, परमेश्वरलाई तपाईको बिन्तीको जानकारी दिनुहोस्। म प्रभु येशूसँग बिन्ती गर्दछु कि तपाईंले मबाट चिन्ता लिनुहोस्। म येशूको नाममा म भित्र डरको भावना विरुद्ध आउँछु।
प्रभु, म मेरो पटरी स्वास्थ्य को लागी अलौकिक उपचार को लागी प्रार्थना गर्दछु। तपाईंको वचनले भन्छ कि तपाईंले हाम्रा सबै अशक्तताहरू आफैंमा लिनुभयो र हाम्रा सबै रोगहरू तपाईंले निको पार्नुभयो। म येशूको नाममा निको पार्ने आदेश दिन्छु।
प्रभु येशू, म अनुग्रहको निम्ति प्रार्थना गर्दछु कि सँधै तपाईमा भरोसा राख्नुहोस्, प्रभुले येशूको नाममा मलाई यो जारी गर्नुहोस्। किनकि लेखिएको छ, नडराओ, म तिमीहरूसँग छु, निराश नहो किनकि म तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। म अलौकिक लागि प्रार्थना, प्रभु येशूको नाम मा यो मलाई जारी।
तपाईंको वचनले मलाई शान्तिको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। धर्मशास्त्र भन्छ म तिमीसँग शान्ति छोडदछु, मेरो शान्ति म तिमीलाई दिन्छु: संसारले दिने जस्तो होइन, म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु। तिम्रो हृदय विचलित नहोस्, र यो डराउनु पर्दैन। म येशूको नाममा चिन्तित हुन अस्वीकार गर्छु।
किनकि यस्तो लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएन तर शक्ति, प्रेम र शान्त दिमागको, मलाई येशूको नाममा चिन्तित छैन। म प्रार्थना गर्छु कि तपाईंको सान्त्वना ममाथि आइपर्नेछ, येशूको नाममा मेरो दिमागमा चलिरहेको सोचाइको भीडमा पनि।
हे परमप्रभु, म तपाईंमाथि भरोसा गर्छु र म कहिले निराशा हुने छैन। यद्यपि म मृत्युको छायाको उपत्यकामा हिंड्छु, तर मलाई कुनै हानि हुने डर हुँदैन किनभने तपाईं मसँग हुनुहुन्छ, तपाईंको छडी र डन्डाले मलाई सान्त्वना दिन्छ। म जीवनको सबै ramifications मा सान्त्वना लागि प्रार्थना, प्रभु येशूको नाम मा मलाई यो दिनुहोस्।
तपाईंले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ कि तपाईं मसँग हुनुहुन्छ। म येशूको नाममा केहि लागि चिन्ता गर्न इन्कार गर्छु। मेरो पीडा गयो येशू नाम हो, मेरो चिन्ता ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतले घुलमिल भएको छ, येशूको डरमा मेरो डर हटाइएको छ.
किनभने तपाईंको वचनले प्रतिज्ञा गरेको छ कि तपाईंले मलाई बचाउनुहुनेछ। म प्रार्थना गर्दछु कि मेरो दु: खको क्षणमा तपाईका हातहरूले मलाई बचाउनेछन्। जब म जीवनको पानीमा हिंड्छु, म तपाईंसँगै प्रार्थना गर्छु भनेर। जब मेरो पछाडि भित्तामा हिर्काइएको छ र सबै आशा दुर्घटनाग्रस्त छ, म तपाईं येशू नाम मा मेरो शरणस्थान हुनेछ भनेर प्रार्थना गर्दछु।
अघिल्लो लेखमाकिन प्रभुको प्रार्थना गर्नु भनेको प्रार्थना गर्ने एक प्रभावकारी तरिका हो
अर्को लेखमाPS PSALM संस्करण तपाइँको बच्चाहरुको लागि प्रार्थनामा प्रार्थना गर्न
१ financial वित्तीय fromण बाट छुटकारा प्रार्थना